गुल्मीमा ३ को हत्या, २ पक्राउ - VOICE OF NEPAL
३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०२:०१
145 ??? ???????
– गंगा खड्का, गुल्मी।
तीनजनाको हत्या अभियोगमा गुल्मी प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । गत कार्तिक १६ गते गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको हर्चाचौरमा हत्या गरी फालिएका एक महिला र दुई बालिकाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा बागलुङ गलकोट नगरपालिका–८ ज्यामिरेका ४६ वर्षीय पूर्णबहादुर सुनार र १९ वर्षीय माधव सुनार रहेको प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रसिंह खड्काले जानकारी दिए । शुक्रबार उनीहरुलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले थप एक जना फरार रहेको जानकारी दिएको छ ।
उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको संयुक्त टोलीले पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जाबाट नियन्त्रणमा लिईएको थियो । उनीहरुमाथि मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका–३ हरकपुरकी ३२ वर्षीय शिवमाया लिम्बू र उनका जुम्ल्याहा छोरी ७ वर्षीय गंगा र जमुना मगर रहेको हत्या गरेको अभियोग छ ।
घटना भएको झण्डै एकसातापछि महिला र बालिकाको शव स्थानीयले देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटना घटेको लामो समयपछि थाहा पाएको प्रहरीले घटनास्थल पुगेर शव पहिचानका लागि मातहतका प्रहरी चौकी र स्थानीयलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । दुईसाता बितिसक्दा समेत शवको पहिचान हुन सकेको थिएन ।
लिम्बू केही वर्षदेखि जुम्ल्याहा छोरीसहित पोखरा महानगरपालिका–२५ लामाचौरमा डेरा गरी बस्दै आएकी थिइन् । घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका पूर्णबहादुर पोखरामा होटल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । लिम्बू उनकै होटलमा काम गर्दे आएको बुझिएको छ । सोही क्रममा लिम्बू र सुनारबीच शारिरीक सम्बन्ध रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । लिम्बूले पटक–पटक सुनारलाई विवाह गर्न आग्रह गर्दे आएकी थिइन् । सुनारले बिवाह गर्छु भन्दै बाग्लुङ घर जाऊँ भन्दै जुम्ल्याहा छोरी गंगा र जमुनालाई लिई कार्तिक ९ गते पोखराबाट बुटवल हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर लगेका थिए । उक्त दिन शान्तिरपुरको एक होटलमा बास बसेर राति २ बजेको समयमा गाडी रिर्जभ गरी उनीहरु हर्राचौर पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसपछि सुनारको समूहले लिम्बू उनकी जुम्ल्याहा छोरीको हत्या गरी पोखरा पुगेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घटनामा मृत्यु भएका तीनै जनाको शव पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ । आफन्त आएपछि शवको पोष्टमार्टम गरी शनिबार दिउँसोसम्म बुझाउने प्रहरीको भनाइ छ ।